Degso Clean Master loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (20.60 MB)
Degso Clean Master,
Download Nadiifi Master
Master Master waa nadiifiye kumbuyuutar bilaash ah oo xoojiya. Master Master waa barnaamij Windows ah oo leh astaamo waawayn sida tirtirka faylasha aan loo baahnayn (qashinka), xawaaraha kombiyuutarka, nadiifiyaha asturnaanta, soo kabashada faylka, cusbooneysiinta otomaatiga, auto nadiifinta faylasha, tirtir faylasha iyo galka gabi ahaanba, biraawsarka otomatiga nadiifka ah, cusbooneysii darawalnimada iyo hagaajinta darawalka dhibaatooyinka Nadiif Master PC iyo Master Master ayaa lagu soo dejisan karaa bilaash ahaan Android APK.
Clean Master waa barnaamij lagu nadiifiyo kombiyuutarka oo loogu talagalay dadka isticmaala ee jecel inay si taxaddar leh u isticmaalaan kombuyuutarradooda oo ay u nadiifiyaan fursad kasta oo ay helaan si waxqabadkoodu uusan u yaraanin. Master Master, oo kumbuyuutarkaaga ku dhaqaajinaya nadiifinta, waa barnaamij weyn oo gabi ahaanba la bixiyo.
Uma baahnid inaad ogaato wax dheeri ah si aad u isticmaasho Nadiif Master, kaas oo loo soo saaray si isku mid ah naqshadeynta barnaamijyada moobiilka ee isku midka ah isla qaybtaas. Iyada oo adeegsigeedu yahay mid si fudud loo fahmi karo, barnaamijka, oo bixiya adeegsiga hal-batoon, wuxuu kaa caawinayaa inaad tirtirto dhammaan faylasha aan loo baahnayn (qashinka) ah ee ku urursan kombuyuutarkaaga.
Haddii aadan si joogto ah u isticmaalin kombiyuutarkaaga, feylashaan aan loo baahnayn waxay ku soo ururayaan waqti ka dib, taasoo ka dhigaysa kombuyuutarkaaga inuu gaabis noqdo isla markaana uu qaato meel aan loo baahnayn oo ku jirta diskiga kombiyuutarkaaga. Haddii aad u malaynayso inaan si taxaddar leh u isticmaalo oo aysan jirin faylal aan loo baahnayn, waad khaldan tahay. Sababtoo ah faylasha aan loo baahnayn waxay ku urursan karaan qaybaha kala duwan ee kombuyuutarkaaga waqti ka dib, xitaa haddii aadan rabin. Gaar ahaan haddii aad isticmaashay Chrome, Firefox iyo daalacashada la midka ah muddo dheer adigoon nadiifin, xitaa waad la yaabi doontaa cabirka faylka aan loo baahnayn ee soo muuqan doona ka dib nidaamka iskaanka.
Barnaamijka, oo kuu oggolaanaya inaad tirtirto dhammaan faylasha qashinka ah ee daalacayaasha, nidaamka nidaamka, keydka webka, maqalka iyo fiidiyowyada, faylasha diiwaanka, waa in ka badan 2 GB celcelis ahaan, xitaa kumbuyuutarka caadiga ah ee kombiyuutarka. Way fiicantahay in la tirtiro feylashaan aan loo baahnayn hal guji.
Haddii aad rabto inaad u isticmaasho kombiyuutaradaada si dhakhso leh oo leh waxqabad sare adoo si joogto ah u nadiifinaya, laakiin aad caajis u tahay waxyaabo kale oo la sameeyo, waxaan hubaal kugula talin lahaa inaad soo dejiso Nadiifi Master bilaash ah iskuna day.
7 Sababood oo Loogu Soo Dejisto Nadiif Master PC
Nadiifi faylasha aan loo baahnayn (qashinka): Nidaamka horumarsan ee Master-ka nadiifi in ka badan 1000 barnaamij. Hal guji, waad ku nadiifin kartaa feylasha aan loo baahnayn (haraaga, qashinka) ee ku haray nidaamka si gabi ahaanba looga xoreeyo booska kumbuyuutarkaaga.
Dardargelinta PC: Macsalaameyn nidaamka dib u dhac! Hal guji, waad joojin kartaa barnaamijyada bilowga ah ee aan loo baahnayn, xawaareyn kartaa waqtiga kabaha, waxaadna caqli ahaan u wanaajin kartaa nidaamka iyo goobaha shabakadaha.
Nadiifinta Asturnaanta: Waxaad ku saari kartaa 6 nooc oo qatarta u gaarka ah hal guji. Jooji kuwa soo-dhex-gala oo ka-saar qoraalada halista ah (shabakadda internetka) oo leh anti-tracking.
Cusbooneysiinta darawalnimada: Darawalku wuxuu xoojiyaa qalabka kumbuyuutarka oo uu hagaajiyaa in ka badan 5,000,000 oo qalab iyo darawallo ah. Marka la soo koobo, waxaad si fudud u hagaajin kartaa dhibaatooyinka darawalnimada PC.
Is-nadiifin caqli-gal ah: Ogeysiisyada waqtiga-dhabta ah iyo auto-nadiifinta faylasha qashinka ah
Waxqabadka hal-guji kor u qaadista: Caqli ahaan wuxuu hagaajiyaa nidaamka iyo goobaha shabakadaha si looga fogaado dib u dhac.
Faylka faylka: Si ammaan ah u tirtir waxa ku jira faylasha xasaasiga ah iyo kuwa aan la ogaan karin iyo fayl ka baxsan soo kabashada
Clean Master Noocyada
Cabirka Faylka: 20.60 MB
Horumar: Cheetah Mobile